Ogaden News Agency (ONA) – Wareegii 2aad ee dhismaha Biya-xidheenka Masar waa lagaga adkaaday – Daawo doodan Al-Jazeera Inside Story
Wareegii 2aad ee dhismaha Biya-xidheenka Masar waa lagaga adkaaday – Daawo doodan Al-Jazeera Inside Story
Posted by ONA Admin	/ June 8, 2013
Sida aad ku arki doontaan doodan, Masaarida tala ma hayaan aan ka ahayn inay cuskadaan Heshiis la dajiyay Qarnigii uu Ingriiska gumaysanayay dalkooda, taasoo ay adagtahay inay Itobiya dhaqan galiso ama ixtiraamto haddii aanay Masar lahayn awood laga cabsado oo hadalka ay leedahay ay kaga dhabayn karto. Taasina ma muuqato hadda, gaar ahaan qofkii daawaday wada-tashigii uu la sameeyay M/W Mursi Indheergaradka dalkiisa oo ka koobna xisbiyada mucaaradka ah.
Waxaa ka caqli badnayd Masaaridii halkaa ku kulantay islaantii Somaliyeed ee wiilasheeda ku tidhi geedkaa hoos fadhiista oo afka isasaara si cadawga idiin shiraya idiin tuhmo inaad qorshe u dajinaysaan. Xaaladda Masrr taasoo kale ayay ahayd hasa ahaatee waxay maqashiiyeen cadawgoodii waxay ku faqayeen, waana lagu qoslay.
Waxaa hubaal ah inay marxalad aad u qalafsan mareyaan umadda Masar. Waxayna u badan tahay in qorshe hoose uu jiro oo lala maagan yahay dalkaa. Dawladaha reer Galbeedka qorshaha ay u dajiyaan dunida 3xaad waxay ku saleeyaan ugu yaraan 20-50 sano xaaladda siday noqonayso, waxaana dhab ah xogta ay ka ogsoonyihiin arimaha gudaha ee dalalka dunida 3xaad gaar ahaan Bariga Dhexe inay ka badan tahay midda ay xukuumadahooda ka ogyihiin. Itobiya tan iyo markay is-rakeen bad mareenkii boqortooyadii Bortuqaal (Portugal) ee Christopher Columbus waxay ka mid ahayd dawladaha isticmaariga ee loo adeegsado ajendayaasha lala maagan yahay GA iyo guud ahaa Qaaradda Afrika.